တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: အမှိုက်များ လွင့်နေသည် …
ဘ၀မှာ နောက်ထပ် နာရီပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ဆက်စပ်ပုံတော်လိုက်တာ...း))).... တကယ်တမ်းစိတ်ကတော့ သိမ်းဆည်းလို့ခက်တယ်နော်....
မိမိစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင် လိုက်၍ သိမ်းဆည်းရခြင်းသည် မလွယ်ပါကြောင်း…….
စာလေးဖတ်သွားတယ်နော် စိတ် တွေ မိမိသန္တာန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စိတ်အညစ်အကြေးတွေကို သတိဖြင့် စောင့်ကြည့် ကောက်သိမ်းရပေဦးမည်။
အဲဒါ မှန်တယ်နော် စိတ်က အမြဲတန်းဖောက်ပြန်နေတယ်
7/05/2010 2:26 PM
အစ်မ အတွးလေးက ကောင်းလိုက်တာ
သတိပြုစရာလေးပါဘဲ.. သေသေချာချာကို ဖတ်သွားပါတယ်..
7/08/2010 2:28 PM
as usual you have unbelievable talent in writing and I rally like your thoughts and ideas.... my "sate" is also "lwint" all the time. it's very difficult to keep it steady but got to try, we don't haveachoice, do we....
7/08/2010 11:22 PM
မေရေ... မျောချင်တိုင်းမျောနေတဲ့ စိတ်တွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ ပို့ စ်လေးပါ...မောဟတွေနဲ့ ငိုက်မြည်းနေတဲ့အချိန်တွေကို မေက လှုပ်နိုးပေးလိုက်လို့ ကျေးဇူးပါ... ဘာကြောင့်မှန်းမသိ... ငယ်က ဖတ်စာလေးတွေကို အမလဲ သံယောဇဉ်တွယ်မိတယ်... မေ့စိတ်ကူးလေးကလှလိုက်တာ...
7/10/2010 12:22 PM
မသီတာကြီး ငိုက်နေလို့ ဒီပို့စ်ကို ဟိုတကွက် ဒီတကွက်ဖတ်သွား...
အမယ်... ငယ်ငယ်က ဖတ်စာထဲက ပျင်းရိခြင်း ခြောက်ပါး ပုံလေးတွေနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားတာကိုတော့ ကွက်ကနဲ မြင်လိုက်မိသလိုလို...
အရေပြား ပါးများ ပါးနေလား ကိုတော့ အစအဆုံး သေသေချာချာ ဖတ်သွားပါတယ်
7/14/2010 5:03 PM